यदि यो रुखमा तपाई जसले नाग (सर्प) देख्नुहुन्छ उसलाई मिल्नेछ चमत्कार ! – Classic Khabar
August 28, 2021 85
सामाजिक सञ्जालमा समय समयमा अनेक कुराहरु सर्वत्र फैलिने गर्छन् । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा एक तस्विर निकै फैलिरहेको छ । तस्विर हेर्दा तपाईं पनि सोचनिय अवस्थामा पुग्नु हुनेछ । मानिसहरुलाई त्यस्ता तस्विरहरु धेरै मन पर्छ । अहिले एक तस्वीर चुनौतीसहित इन्टरनेटमा फैलिरहेको छ । यो चुनौती पूरा गरेर, तपाईं आफ्नो आँखा कति तेज छ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ ।
Prevश्रीमानको कमजोरीले गर्दा बच्चा नजन्मिएर सहमतीमा आफ्नै ससुरासंग श्रीमतीई पठाएपछि…!
Nextबाढी र पहिरोले देशैभरि बि’तण्डा मच्चायो, हजारौं घर डुबानमा